Vondron-kintana. Ny vondron-kintana dia toerana ahitana kint
ⓘ Vondron-kintana. Ny vondron-kintana dia toerana ahitana kintana maro dia maro izay nifanakaiky taminny alalanny hery vokatry ny lanja. Tsy kintana irery akory n ..
Ny fiainana mandrakizay dia fiainana sambatra mitohy tsy manam-pahataperana, araka ny finoan ny olona sy ny fampianaran ny fivavahana sasany. Ilazana ny fiainana sambatra mitohy aorian ny fahafatesana izany. Ao amin ny fivavahana kristiana no tena ampianarana azy amin izao, nefa misy fivavahana hafa koa ahitana izany. Ny fiainana mandrakizay dia fiheverana teolojika jiosy sy kristiana momba an Andriamanitra sy ny olombelona.
Ny vondron-kintana dia toerana ahitana kintana maro dia maro izay nifanakaiky taminny alalanny hery vokatry ny lanja. Tsy kintana irery akory no misy ao aminny vondron-kintana fa ahitana, vovo-kintana, etona, plasma, ary zavatra mainty izay tsy hita maso. Ny isanny kintana ao amina vondron-kintana iray dia eo aminny folo tapitrisa hatraminny roa ambinny folo tiriliôna, izay mihodina manodidina ivon-danja iombonana.
Refesina aminny taon-kazavana ny savaivonny vondron-kintana iray, eo aminny iray hetsy eo ho eo ny savaivonny ankamaroanizy ireo ; ny halaviranny vondron-kintana roa dia isaina aminny taon-kazavana aman-tapitrisany.
Ny zavatra mainty dia miseho ho 90% ny lanjanny vondron-kintan arehetra, mbola vitsy ny fampahalalana ananana mikasika ilay zavatra mainty. Eo anivonny ankamaroanny vondron-kintana dia ahitana lavaka mainty lehibe izay mamotika ny kintana mandalo eo akaikiny na midona aminy.
1. Rohy ivelany
fr) Étude sur les galaxies elliptiques, spirales et irrégulières
fr) Les galaxies et lunivers, sur le site de lUniversité libre de Bruxelles
fr) Étoiles et galaxies, sur le site du Centre de recherche astronomique de Lyon